Kala duwanaanta luqadda - AfricArXiv
By AfrikArXiv , 2 toddobaad 2 toddobaad horaantii
By Johanssen Obanda, 3 bilood 1 bishii horaantii
By Johanssen Obanda, 4 bilood 1 bishii horaantii
By Luke Okelo, 5 bilood 1 bishii horaantii
By Kooxda Tarjumaadda Sayniska, 7 bilood 1 bishii horaantii
Florence Piron waxay ahayd aqoonyahan ku takhasusay cilmiga anthropologist iyo anshax, waxay ka shaqeyn jirtay borofisar waaxda warfaafinta iyo isgaarsiinta ee jaamacada Laval ee ku taal Quebec, Canada. Iyada oo ah u doodaha xoogan ee Fuusnaanta Furan, waxay ku baratay fikirka halista ah koorsooyin kaladuwan oo ku saabsan anshaxa, dimoqraadiyada iyo wada noolaanshaha waxayna si xamaasad leh u baareysay xiriidhada Akhri wax dheeraad ah…
By Kooxda AfricArXiv, 7 bilood 1 bishii horaantii
Qaababka Cilmi-baarista ee Decolonising
AfricArXiv waxay gacan ka gaysanaysaa gumaysiga iyadoo kobcinaysa fahamka gumaysiga iyada oo loo marayo horudhacyo; aqbalida gudbinta hordhaca ah ee lingua-franca iyo luqadaha hooyo, iyo awood u siinta lahaanshaha cilmi baarista Afrikaanka ee Afrikaanka iyada oo loo marayo aasaasida bakhaar baahsan, bakhaar ay leedahay Afrika oo kuyaala qaarada Afrika.
By Joel Onyango , 8 bilood 1 bishii horaantii
Helitaan furan (OA) waa aasaaska mabaadii'da iyo dhaqammo fara badan oo natiijooyinka cilmi-baarista loogu qaybinayo internetka, lacag la'aan ama caqabadaha kale ee marin-u-helka ah. AfricanArXiv iyo Shabakada Sayniska Akhriska Afka ee Afrika (ASLN) waxay iska kaashanayaan sidii kor loogu qaadi lahaa soo gudbinta qodobbada ku saabsan AfrikaArXiv iyo tarjumidda qodobbada Akhri wax dheeraad ah…
By Johanssen Obanda & Abdullahi Tsanni, sano 1 1 bishii horaantii
Faafinta macluumaadka ku saabsan waxqabadka ugu wanaagsan iyo talo soojeedinta habdhaqanka si loo yareeyo faafitaanka coronavirus waxaa badanaa lagu bixiyaa Ingiriis. Qiyaastii 2000 oo luqadood oo maxalli ah ayaa looga hadlaa Afrika gudaheeda dadkuna waxay xaq u leeyihiin in lagu wargeliyo afkooda hooyo waxa ku dhacaya iyo sida ay u awoodaan Akhri wax dheeraad ah…
By Kooxda AfricanArXiv, 2 sano 9 bilood horaantii
By Jo Havemann, 2 sano 9 bilood horaantii